Kwethulwe amaPhrojekthi Esimo Sezulu angama-63 ukwehlisa ukukhishwa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kwethulwe amaPhrojekthi Esimo Sezulu angama-63 ukunciphisa umisi
IsiJalimane Portillo | | Ukuguquka kwesimo sezulu
Amaphrojekthi wokulwa nokuguquka kwesimo sezulu aya ngokuya edlondlobala njengoba umnotho wawo wonke amazwe emhlabeni kuzodingeka uzivumelanise ngandlela thile nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu.
Ama-Climate Projects akhombisile ukuthi ayithuluzi eliwusizo kakhulu ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu. Eyokuqala yaqala ngo-2012 futhi yaba nomthelela ekwehliseni amathani ayizigidi eziyi-7,4 we-CO2 emkhathini. Yimiphi imiphumela le mikhankaso enayo ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu?
Amaphrojekthi Esimo Sezulu
Ama-Climate Projects aqala ukwenziwa ngonyaka wezi-2012. UNgqongqoshe Wezolimo Nezokudoba, Ezokudla Nezemvelo, u-Isabel García Tejerina, wethule Amaphrojekthi Esimo Sezulu angama-63 akhethelwe lolu cingo lwesihlanu oluhambisana nonyaka wezi-2016.
Lawa maphrojekthi asiza ukukhuthaza ukuncishiswa komoya ongcolile obamba ukushintsha kwesimo sezulu. Bigxile ekwehliseni ukungcola komkhakha emikhakheni okuthiwa isabalalisa izinto ezifana nezokuthutha, izindlu kanye nemfucuza ezibhekele lokho ngaphezu kwe-60% yokukhishwa kwegesi yokushisa okushisa eSpain nase-European Union.
AmaPhrojekthi Esimo Sezulu akhethiwe azosebenza ngempumelelo ekunciphiseni ukukhishwa kwegesi engcolisa umoya lapho kusiza ukuqamba kabusha ekuthuthukisweni kobuchwepheshe futhi kukhiqize imisebenzi yezomnotho nokuqashwa ezweni lethu. Amaphrojekthi avunyelwe emikhakheni ehlukene ezimele kanye nekahulumeni.
Eziningi zazo zigxila emnothweni oyindilinga futhi zisekelwe kumodeli yokukhiqiza esizoyisekela ngokuqinile eminyakeni ezayo. Ekugcineni, uTejerina uqhakambise umnikelo wamaPhrojekthi Esimo Sezulu ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu, selokhu yasungulwa ngo-2012, kuchaze ukwehliswa okuphelele kokukhishwa kwe-CO2 okulingana namathani angaphezu kwezigidi eziyi-7,4.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Kwethulwe amaPhrojekthi Esimo Sezulu angama-63 ukunciphisa umisi
Uhlelo lokusiza ngesomiso eBolivia